Cockpit: Fampiharana miaraka amin'ny interface web ho an'ny fitantanana server | Avy amin'ny Linux
Cockpit: Fampiharana miaraka amin'ny interface web ho an'ny fitantanana server
Linux Post Install | 19/08/2021 06:00 | Tambajotra / seriver, Tutorials / Manuals / Tips
Andro vitsivitsy lasa izay, dia nitety trano fanta-daza sy malaza izahay fitaovana rindrambaiko Sehatra IT an'ny tambajotra sy mpizara antso Nagios Core. Ary anisan'ireo safidy hafa hatrizay, lazainay "Cockpit".
Ka anio isika dia hijery ity fitaovana rindrambaiko lehibe antsoina hoe ity "Cockpit", satria, mety ho tena ilaina izy roa ho an'ny Mpitantana ny rafitra / mpizara (SysAdmins), raha ny amin'ny hafa rehetra Matihanina IT o Mpankafy solosaina sy Linux.
Ary ho anao izay mbola tsy nandinika ny lahatsoratray teo aloha Nagios Core ary fitaovana hafa mitovy amin'izany amin'ny sehatry ny Tambajotra sy seriver na fampiasana manokana ho an'ny Mpitantana ny rafitra / mpizara (SysAdmins), hamela avy hatrany eto ambany rohy vitsivitsy amin'ireo famoahana teo aloha mifandraika amin'ity sehatra IT ity izahay:
"Nagios® Core ™ dia tambajotra misokatra sy fampiharana fanaraha-maso ny rafitra. Izy io dia manara-maso ireo mpampiantrano (solosaina) sy serivisy nofaritanao, manaitra anao rehefa misy ny tsy mety sy rehefa mihatsara izy ireo. Nagios Core dia noforonina tany am-piandohana mba hiasa eo ambanin'ny Linux, na dia tokony hiasa eo ambanin'ny ankamaroan'ny Operating Systems an'ny Unix hafa koa aza izy io. Ary io koa dia kinova maimaimpoana ho an'ny fitaovantsika ankehitriny antsoina hoe Nagios XI." Nagios Core: Inona ny atao hoe Nagios ary ahoana no hametrahana azy ao amin'ny Debian GNU / Linux?
Webmin: fitantanana avy amin'ny tranokala
TurnKey Linux: Ny Virtual Library Library
1 Cockpit: kinova vaovao miorina vaovao 250
1.1 Inona ny Cockpit?
1.3 Ahoana ny fametrahana azy amin'ny Debian GNU / Linux 10?
1.3.1 Fampidinana, fametrahana ary fampiasana
1.3.2 Sarin'ny sary
2 Safidy 10 maimaim-poana sy misokatra
Cockpit: kinova vaovao miorina vaovao 250
Inona ny Cockpit?
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialin'ny Tetikasa Cockpit, "Cockpit" dia fitaovana rindrambaiko nofaritana toy izao:
"EIzy io dia sehatr'asa mifototra amin'ny tranonkala ho an'ny mpizara, natao ho an'ny rehetra, indrindra ireo izay tsy manana traikefa amin'ny Linux, ao anatin'izany ny mpitantana ny Windows Operating Systems. Ary koa, ho an'ireo izay mahalala ny Linux ary maniry fomba mora sy sary hitantanana ireo mpizara sy solosaina hafa amin'ny tamba-jotra. Ary farany, mety ihany koa ho an'ireo mpandrindra IT za-draharaha izay mampiasa fitaovana hafa amin'ny ankapobeny, fa te hanana topy maso momba ny rafitra tsirairay."
Manome antsipiriany an'izany ireo mpamorona azy "Cockpit":
Mora ampiasaina izy io: Satria mampihena ny fampiasana ny kaomandy terminal, manamora ny fanatanterahana ny asa amin'ny alàlan'ny tranokala amin'ny fampiasana totozy, ary manana terminal mitambatra, izay ilaina rehefa ilaina na takiana ny fampiasana azy.
Izy io dia manana fampidirana tsara amin'ny rafitra fiasa ampiasaina: Hatramin'izay dia mampiasa API efa misy ao amin'ny rafitra izy. Tsy mamerina mamorona subsystem na manampy sosona amin'ny fitaovana azy manokana izy io. Amin'ny alàlan'ny default, Cockpit dia mampiasa ny logins sy ny tombotsoan'ny mpampiasa rafitra mahazatra. Ny fidirana amin'ny tambajotra dia manohana teknika fanaovana sonia tokana sy fanamarinana hafa ihany koa. Ary koa, tsy mandany loharano na mihazakazaka any aoriana rehefa tsy ampiasaina. Satria mandeha amin'ny fangatahana izy, noho ny fampandehanana ny sokajy systemd.
Azo itarina izy io: Misaotra fa manohana lisitr'ireo fampiharana tsy voatery atao (add-ons / plugins) sy antoko fahatelo izay mampitombo ny fiasa sy ny habeny. Noho izany, ahafahanao manoratra ireo modely manokana nataonao mba hahatonga ny Cockpit hanao izay takiana.
Miaraka amin'ny "Cockpit" asa maro no azo atao, ka anisan'izany ireto 10 manaraka ireto:
Diniho ary ovao ny fikirakirana tamba-jotra.
Ataovy manamboatra firewall.
Tantano ny fitehirizana (ao anatin'izany ny partition RAID sy LUKS).
Mamorona sy tantano ny milina virtoaly.
Misintona ary mihazakaza kaontenera.
Mikaroha sy kitay ny rafi-fikarohana.
Diniho ny fitaovan'ny rafitra iray.
Vaovao farany ny rindrambaiko.
Araho maso ny zava-bita.
Tantano ny kaontin'ny mpampiasa.
Ahoana ny fametrahana azy amin'ny Debian GNU / Linux 10?
Alohan'ny hanombohana ity ampahany ity dia tsara ny manamarika toy ny mahazatra fa amin'ity tranga azo ampiharina ity dia hampiasa ny mahazatra isika Mamerina Linux antsoina hoe Fahagagana GNU / Linux, izay miorina amin'ny MX Linux 19 (Debian 10). Izay natsangana taorian'ny «Torolàlana Snapshot MX Linux».
Na izany aza, misy GNU / Linux Distro fanohanana inona Systemd. Noho izany, hampiasa an'ity izahay MX Linux respin manomboka amin'ny Rafitra boot GRUB amin'ny safidinao miaraka amin'ny "Atombohy amin'ny Systemd". Raha tokony ho ny safidinao default, izay tsy misy Systemd na aleo miaraka Systemd-shim. Ary hanatanteraka ny baiko baiko rehetra avy amin'ny Mpampiasa Sysadmin, raha tokony ho Root mpampiasa, avy amin'ny Respin Linux.
Ary ho an'ny anao izao misintona, mametraka ary mampiasa, hampiasa ny torolalana ho an'ny GNU / Linux Debian de «Torolàlana fametrahana».
Fampidinana, fametrahana ary fampiasana
Para Distros Debian 10 (Buster) na miorina amin'izy ireo, ny safidy tsara indrindra amin'ny misintona, mametraka ary mampiasa de "Cockpit" , dia ny manamboatra ny Debian Backport Repositories, avy any mba hanatanterahana ny zava-drehetra am-pilaminana miaraka amin'ny kinova farany azo atao. Ary noho izany dia tsy maintsy vonoina ireto manaraka ireto baiko baiko ao amin'ny terminal (console) an'ny Operating System anao:
Avy eo isika ihany open browser ary soraty amin'ny bara adiresy ny làlana eo an-toerana na lavitra an'ireo fitaovana tiantsika hotanterahina. Raha toa ka solosaina lavitra ianao dia tsy maintsy napetraka ihany koa "Cockpit", araka ny aseho etsy ambany:
Raha mila fanazavana fanampiny momba "Cockpit" azonao atao ny mijery ireto rohy manaraka ireto:
Fampiharana (Plugins / Plugins)
Safidy 10 maimaim-poana sy misokatra
Fanaraha-maso ny mpizara PHP
Raha te hahalala bebe kokoa momba ireo safidy ary bebe kokoa, kitiho ity rohy manaraka ity: Rindrambaiko fanaraha-maso fitaovana sy tambajotra eo ambanin'ny Open Source.
Raha fintinina, toy ny efa hita "Cockpit" dia toy ny Nagios Core fitaovana rindrambaiko lehibe eo amin'ny sehatry ny Tambajotra / seriver ary ny Mpitantana ny rafitra / mpizara (SysAdmins). Fa ankoatry ny fanoloana na fanoloana Nagios Core Izy io dia famenon-javatra tonga lafatra indrindra aminy, mamorona a kitapo fampiharana ho an'ny fanaraha-maso sy fitantanana fitaovana (mpampiantrano) amin'ny tamba-jotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Cockpit: Fampiharana miaraka amin'ny interface web ho an'ny fitantanana server
Ny safidy hafa dia ny webmin ..
Mamaly an'i Luix
Miarahaba anao, Luix. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara.
Midnight Commander 4.8.27 dia miaraka amin'ny fanatsarana isan-karazany sy ny fanohanana ny alacritty sy ny tongotra